mardi, 02 juin 2020 16:35
Anorotsangana-Ambanja: Olona 12 no voasambotra mpamotika ala honko
Olona miisa 12 no voarohirohy amin’ny fanimbana ala honko hanaovana saribao tany Bezavona sy Antanambao Andranomody, Kaominina Anorotsangana, Distrika Ambanja, Faritra DIANA.
Voasambotra nandritra ny hetsika manokana nifarimbonan’ny sampandraharaham-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy, miaraka amin’ny mpitandro ny filaminana sy ny tetikasa Kobaby, ny fikambanana Famelona ary ireo vondron'olona ifitony.
mardi, 02 juin 2020 16:15
Androy: Omby mitontaly 285 tafaverina amin’ny tompony, dahalo 3 maty voatifitra
Tanàna telo samihafa, Ambohimalaza, Ambitiky ary Sarisambo, samy ao anatin’ny Distrika Ambovombe, no notafihin’ny andian-jiolahy tamin’ny ora mitovy sady narahana halatr’omby ny alatsinainy 01 jona 2020. Jiolahy anjatony mirongo fitaovam-piadiana no manao io asa ratsy io.
Nifarimbona ny Zandary avy amin’ny Vondron-tobim-pileovana Androy sy Anosy nanao ny fanarahan-dia. Nisy ny fifandonana tamin’ireo andian-jiolahy. Maty voatifitra ny telo tamin’ireto farany, tafaverina avokoa ireo omby 285 ka efa natolotra ny tompon’omby. Tsy misy naninona ny mpitandro ny filaminana.
mardi, 02 juin 2020 16:14
Itremo – Ambatofinandrahana: Basy mahery vaika tafaverina
Nandritra ny hetsika fampandriana fahalemana ny tontolo ambanivohitra no nahazoan’ny Zandary basy iray MAS36 tsy nisy bala, natsipin’ny dahalo teo ampitsoahana rehefa nandindona azy ireo ny fisamborana hataon’ny andiana zandary tao Antoby Fokontany Tsimanariloka, Kaominina Itremo, Distrika Ambatofinandrahana androany vao maraimbe.
Ity no basy mahery vaika faha-10 azon’ny Zandary ao amin’ny vondrompileovana Amoron'i Mania hatamin’ny janoary 2020, ka AKM ny dimy, ary MAS36 ny dimy ambiny.
mardi, 02 juin 2020 14:36
Lohariandava – Brickaville: Zazavavikely 10 taona maty voahitsaky ny lamasinina
Tao amin’ny PK 212 + 900 Lohariandava Distrika Brickaville, amin’ny zotra Tana- Côte-Est no niseho ny lozam-pifamoivoizana an-dalamby, ny tolakandron’ny sabotsy 30 may 2020. Zazavavy kely 10 taona nandeha tongotra no namoy ny ainy voahosin’ny lamasinina an’ny Jirama fampiasa amin’ny fitsirihana.
Tsy fitandremana no voalaza fa niteraka ny loza.
mardi, 02 juin 2020 14:00
Toliara: Miisa 05 ireo olona mitondra ny tsimok’aretina Covid-19
Niampy 02 indray ireo olona 03 mitondra ny tsimok’aretina Covid-19 eto Toliara ny 24 may 2020. Fianakaviana iray izy ireo, fianakaviana avy namonjy fahoriana tany Toamasina ka raha vao tonga dia efa nahiboka avy hatrany, araka ny fanambarana nataon'ny Filohan'ny Centre Opérationnel Atsimo Andrefana, Edally Ranoelson androany.
Na eo aza izany dia tsy mbola mihatra eto an-tampotanan'i Toliara ny fodiana amin'ny 1 atoandro, mbola mitohy manankery kosa ny « couvre-feu » manomboka amin'ny 9 alina ka hatramin'ny 04 ora maraina.
Tsy mbola mianatra ihany koa ireo mpianatra ankoatra ny kilasy faha-5, faha-9 ary famaranana.
mardi, 02 juin 2020 10:34
Covid-19: Nomena fanampiana ireo mpianatra Barikadimy
Tonga nanatitra fanampiana ho an'ireo mpianatra mbola tavela ao Barikadimy ny Governora Faritra Atsinanana RAFIDISON Richard Théodore niaraka tamin'ireo minisitra mandrindra ny Faritra.
mardi, 02 juin 2020 09:50